ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ - WTE အသင်းဝင် - World Trade Exchange
တစ် ဦး ဖြစ်လာမှပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း WTE အဖွဲ့ဝင်တ ဦး တည်းကိုရွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ် နှင့် ဤနေရာတွင်လျှောက်ထား သို့မဟုတ်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ မေးလ်လိပ်စာနှင့်သင်စာရင်းသွင်းလိုသည့်အသင်းဝင်အစီအစဉ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ပြီးပါက အသင်းဝင်လျှောက်လွှာသင်၏ငွေပေးချေမှုအတွက်သင်၏ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ပါမည်။ သင့်ထံပေးပို့သောငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သောအသင်း ၀ င်ကြေးကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီးလုံ့လဝီရိယရှိရှိပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သုံးသပ်ချက် WTE အသင်းဝင်အစီအစဉ်များ
ကုန်သွယ်မှုအကြွေးဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံရှိသောအကောင့်တစ်ခုရယူပါ
WTE သင်စာရင်းသွင်းထားသောအသင်းဝင်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏စီးပွားရေးအကောင့်ကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလျံဖြင့်ချေးယူလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာအကြွေး ၀ င်ငွေမဟုတ်လျှင်သင်ပြန်ဆပ်စရာမလိုပါ WTE ကြွေးမြီကိုထေမိစေရန်လိုအပ်သည့်အရောင်း ၀ င်ငွေကိုရရှိရန်ကူညီသည်။ ချေးငွေလိုင်းသည်သင့်အား ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည် WTE။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အနာဂတ်ငွေသားကုန်ကျငွေအားလုံးကိုလက်ခံရရှိထားသောချေးငွေများနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်ကို $ 10M မှ $ 50B ဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးပါကသင့် Account Manager မှသင်၏ Account အထောက်အထားများကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို 'သင်အတွက်လုပ်ပြီးပြီ' ကိုရယူပါ
သင်၏အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်သင်မှအမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်ကူညီပေးရန်ရည်ရွယ်သော ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ ရှိသောစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ခန့်အပ်မည် WTE အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်။
သင့်အားတာဝန်ပေးအပ်ထားသောအဖွဲ့သည်သင်၏ကိုယ်စားသင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်လိုအပ်သောအလုပ်၏ ၁၀၀% ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ၀ င်ငွေရရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ရလဒ်မဆိုအောင်မြင်ရန်အတွက်သင့်ဘက်မှမည်သည့်အလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှု၊
ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများ၊ ငွေပေးချေသူများ၊ ကုန်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာများ၊ ဖောက်သည်များအောင်မြင်သောမန်နေဂျာများ၊ ကုန်စည်နှင့်ရေကြောင်းမန်နေဂျာများ၊ အော့ဖ်စက်မန်နေဂျာများ၊ ကောင်တာများ၊ ကုန်သည်များရောင်းသူများ၊ ဘဏ်မန်နေဂျာများ၊ ရှေ့နေများ၊ စာရင်းကိုင်များ၊ အခွန်အတိုင်ပင်ခံနှင့်ဘဏ္Manာရေးမန်နေဂျာများ။
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်“ Business Needs Analysis” ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ “ စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း” သည်သင်၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များ၊ အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ပုံမှန်နှင့်လာမည့်စီးပွားရေးအသုံးစရိတ်များ၊ ရပ်ရွာကတိကဝတ်များ၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအဖွဲ့အားပေးအပ်ရန်သင့်အားလိုအပ်လိမ့်မည်။ A. ၁၂ လအတွင်းဝယ်ယူရန်အစီအစဉ်။ ဤစာရွက်စာတမ်းသည်သင်နှင့်သင်နှင့်အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအတွက်သင်ဝယ်ယူရန်သင်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုမည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ကိုယ်စားလုပ်စေချင်ပါတယ် B မှ ၁၂ လမှ ၃၆ လကြာအရောင်းအ ၀ ယ်။ ဤသည်မှာသင်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစာရင်းပြုစုမည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည် WTE မင်းကို ၁၂ လကနေ ၃၆ လအတွင်းရောင်းဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။
သင်တို့၏စီးပွားရေးပန်းတိုင်များ၊ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ စျေးဝယ်စာရင်း၊ WTE အသင်းဝင်အကျိုးအမြတ်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်ကိုသင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်သင်၏အသင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များ၊ မင်းတို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးရည်မှန်းချက်ကိုပြောပြပါ။ ပြီးတော့သင်အောင်မြင်အောင်ကူညီမယ့်ရလဒ်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများ၊ အသင်းဝင်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည့်စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်ကိုသင်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်သတ်မှတ်ထားသောဖြေရှင်းချက်များ၊ အသင်း ၀ င်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်များကိုသင်အတည်ပြုပြီးတာနဲ့၊ WTE စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်သင်၏ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်လိုအပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှု 100% ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကသင့်အတွက်ကြိုတင်ငွေမပေးသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ WTE အတိုးမဲ့ချေးငွေနှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ၏အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည် WTE သင်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီရန်ကွန်ယက်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်ထူထောင်ထားသောကုမ္ပဏီများ (သို့) အိမ်ခြံမြေများကိုသင့်အတွက်ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်မပေးဘဲဝယ်ယူရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၀၀၀% ROI လုပ်ရန်၊ ရက် ၃၀ အတွင်းသင့်ရောင်းအားကို ၁၀၀၀% တိုးရန်၊ အကြွေးလုံးဝမပေးဆပ်ဘဲအကြွေးပြန်ဆပ်ရန်၊ ၂၄ နာရီ၊ သင်၏ငွေအသုံးစရိတ်များကို ၉၀% အထိလျှော့ချပါသို့မဟုတ်ရက် ၃၀ အတွင်းရုန်းကန်နေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ WTE သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အားလုံးကိုသင်တတ်နိုင်သမျှထင်ထားတာထက် ပို၍ မြန်ဆန်စွာကူညီနိုင်သည်။
မည်သည့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်သင်၏အချိန်တွင်အလုပ်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မရှိပါ အရာရာတိုင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အခြားပွဲစားကုမ္ပဏီများလိုပဲ WTE ငွေပေးချေမှုတစ်ခုစီတွင် ၅% ငွေသားကော်မရှင်လက်ခံရရှိသည်။
WTE သင်၏ဝယ်ယူမှု / စျေးဝယ်စာရင်းတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အိမ်ခြံမြေများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများထံမှထောက်ပံ့ရေးစာချုပ်များကိုလုံခြုံရန်အတွက်သင်၏အကောင့်ရှိအကြွေးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
WTE ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးချဲ့ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးချဲ့ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များကိုသင်၏အကောင့်ထဲရှိငွေပမာဏအထိမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ငွေသားမှသင်၏ပုံသေသို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသင်မပေးရပါ။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့မည်သည့်နေရာ၌မည်သို့သုံးစွဲရမည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါ။ အားလုံးသင့်အတွက်ပြီးပြီ။
WTE သင်၏စျေးဝယ်စာရင်းရှိပစ္စည်းအားလုံးကိုဝယ်ယူရန်၊ ရောင်းသူများနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ သင့်ကိုယ်စားအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းများမှထောက်ပံ့ရေးစာချုပ်များ၊ ရောင်းသူများအားပေးရခြင်းနှင့်သေချာစေရန်အရောင်းအ ၀ ယ်များအပါအ ၀ င်အတိုးကင်းစင်သည့်ကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ပေးခြင်း၊ သင့်ကိုယ်စားဝယ်ယူထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအချိန်မီဖြန့်ဝေသည်။ အလုပ်၏ ၁၀၀% သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆက်နွယ်သော offset တာဝန်များ!
တိုင်းအတွက် WTE အဖွဲ့ဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုလက်ခံရရှိသည်, တစ် ဦး offset တာဝန်ရှိသည်။ အခြေချနေထိုင်ခြင်းသည်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသောတရား ၀ င်လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည် WTE သင်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သင်မှတစ်ဆင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ / ဝန်ဆောင်မှုများ WTE.
ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ တန်ပေးသောအတိုးမဲ့ချေးငွေကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများပြုလုပ်ပါ WTEသင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငွေပြန်ဆပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ WTE ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ချေးငွေကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည် $ 100M ရောင်းအားဝင်ငွေအတွက်ကထေမိဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရောင်းအမိန့်များ၏ $ 100M တန်ဖိုးရှိဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည် WTE သင့်အားတိုးချဲ့ထားသောချေးငွေသည်သင့်အားအပြည့်အဝပြန်လည်ပေးအပ်သည်အထိ။ ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရောင်းအမိန့်ကိုဖြည့်၏လုပ်ငန်းစဉ် WTE သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်အပြည့်အဝချွတ်ပေးဆောင်သည်အထိ "SETTLEMENT ချေါဖြစ်ပါတယ်။